Sunday August 09, 2020 - 13:31:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal khasaara badan dhaliyay oo magaalada Gaalkacyo ku dhaxmaray maleeshiyaad kawada tirsan maamulka isku magacaabay 'Puntland.
Wararka ka imaanaya waqooyiga Gaalkacyo ayaa sheegaya in iska hor'imaad culus uu labada dhinac ku dhaxmaray dhismaha warshaddii Kabista halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidamo daacad u ah Saciid Deni.
Maleeshiyaad horay uga gadooday maamulka Puntland qeybta Mudug oo saldhig ku lahaa shismaha warshadda ayaa toogasho ku dilay Gaashaanlle Sare Cusmaan Cumar Maxamed oo ahaa taliyihii gaarka ahaa ee ciidamada madaxtooyada Saciid Deni.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in 6 askari oo dhammaantood ah dhinacyadii dagaallamay ay dhinteen halka tobaneeyo kale ay dhaawacyo soo gaareen, dad ku sugan waqooyiga Gaalkacyo ayaa sheegaya in ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka 'Puntland' ay lawareegeen gacan ku haynta goobihii lagu dagaallamay.
Magaalada Gaalkacyo waxaa bilihii lasoo dhaafay ka jiray xiisado udhaxeeya ciidamo kawada tirsan maamullada halkaas kajira, shacabka Gaalkacyo ku dhaqan ayaa dhibaato ku qaba dagaallada soo noq noqday ee udhaxeeya maleeshiyaadka mooryaanta ah.